Tsamba 117 kubva kuLope de Vega yakawanikwa neNational Library | Zvazvino Zvinyorwa
Munguva pfupi yapfuura, seti yemakesi akanyorwa neakakura Lope de Vega kune Mutongi weSesa. Pakazara mamwe 117 makadhi pane iwo 96 akanyorwa "muzvinyorwa" zvemunyori wenhetembo. Iwo akanyorwa kubva pakutanga kwezana ramakore regumi nemanomwe uye anoratidza isingazivikanwe Lope de Vega.
Zvinoenderana neNational Library pachayo, kuwanikwa kukuru uku «Iyo yakakosha kwazvo sezvo iwo ari magwaro edhizaira eimwe yeakanyanya kufumura eiyo Zera regoridhe uye zveSpanish zvinyorwa zvenguva dzese ». Kusvika parizvino, varidzi vetsamba idzi vaive Bustos naPardo Manuel de Villena.
Asi, chii chakabatana Lope de Vega uye Duke weSesa?
Mutongi weSassa aive Luis Fernández de Córdoba y Aragón, uyo Lope de Vega aive secretary munenge 1605. Dzakawanda dzetsamba, kunyangwe paine ese marudzi adzo, dzinonyadzisa uye dzinosetsa. Izvi zvinogona kuitika nekuti vese vari vaviri vakanamatira pamwechete mamwe ma forays uye sprees.
Lope de Vega aive mumwe wevananyanduri vakuru ve Baroque, kunyange ichinyanyo kuzivikanwa kune yayo yemitambo. Maitiro aLope de Vega akasiyana zvakasiyana. Kazhinji, mutauro wake waida kuve nyore (kunyangwe iwo baroque maitiro). Lope de Vega yakarima dzakasiyana nhetembo mafomu:
Nhetembo dze kufemerwa kwakakurumbira: Anomiririrwa kunyanya neNew Ballads yake. Misoro yaro inokodzera zvinyorwa zvekunyora zvenguva uye yaigara ichidzokorora nyika yevafundisi neyeMoorish.
Nhetembo dze kufemerwa kwetsika: Kazhinji inoratidzwa mumonets.
Mabasa ake matatu akatanhamara enhetembo ndeaya:
"Rhymes", dzerudo madingindira uye Petrarchan kurudziro.
«Nziyo dzinoyera«, yakanyorwa pasi penjodzi yake, yechitendero.
"Nhetembo dzevanhu nedzemwari gweta Tomé de Burguillos", yeantigongorino uye inoodzwa manzwi.
Izvo zvinofanirwa zvakare kutaurwa kuti aya makadhi akatengwa kwehuwandu hwe 400.000 euros, kuti mamiriro avo ekuchengetedza akanaka kwazvo uye kuti vangadai vakatengeswa kanopfuura kaviri kunze kwenyika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » Tsamba 117 kubva kuLope de Vega yakawanikwa neNational Library